Fat Tukulista Kudhinta Buug-BILAASHKA BILAASHADDA - Dib-u-Celinta Fudud
Bogga ugu weyn » Book » Kaararka Kudhinta Kudhinta Quraariga BIXINTA
WAQTI XADIDAN KELIYA, waad keydin kartaa $ 39.99 waxaadna heli kartaa nuqul BILAASH ah oo buugga Jikada ee Fat Burning Kitchen ee ugu iibinta badan Mike Geary! Kaliya waa inaad lacag yar ka bixisaa rarka iyo maaraynta.
Riix Halkan wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan Buug-gacmeedka Bannaanka Kudhinta Kudhiga ah ee lacag-bixinta.
* Bixinta waa mid ansax ah inta sahaydu socoto. Waxba dib looma cusbooneysiin doono dalabkan, waligaa waa inaad bixisaa midka yar ee maraakiibta iyo maaraynta. Tani waa habka Mike Geary ee dhiirrigelinta qaab nololeed caafimaad leh iyo hab loogu mahadnaqo sameynta buugiisa iibiyaha ugu fiican.
January 29, 2017 Jimicsiga Book, Freebies No Comment	jikada gubanaysa, Mike geary
Detox: Maadadaha iyo Xaqiiqooyinka